Paronychia - एक ... सुनिंनु okolonogtevogo रोलर: कारणहरू र उपचार
Paronychia हो - नङ सापट औंला को सुनिंनु। यो रोग को मुख्य कारण स्टेराइल साधन थियो जो एक मैनीक्योर छ। कम सामान्यतः, एक felon को कारण एक स्क्राच वा prick रूपमा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। यो मानवता को सुन्दर आधा प्रतिनिधिको यो दोष ग्रस्त भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ पाँच पटक बलियो सेक्स भन्दा बढी सम्भावना छन्।
रोग को विवरण
Paronychia - जो व्यक्ति नङ प्लेट वरिपरि छाला अन्तर्गत, वा अरू सम्पर्क संक्रमण मा चोट को फलस्वरूप बाधा सक्नुहुन्छ रोग। सामान्यतया, यो रोग को प्राथमिक कारण - उच्च तापमान वा रसायन संग स्थायी सम्पर्क।
यो रोग निम्न निदान संग एक उलझन रूपमा विकास गर्न सक्ने टिप्पण लायक छ:
पुरानो एक्जिमा हातमा को;
तर रोग को सबै भन्दा व्यक्तिगत स्वच्छता पालना नगर्ने वा अरू तंग जूता लगाउने ती मा नै प्रकट। यसलाई कारण ingrown नङ यो रोग उत्पन्न गर्न सक्ने टिप्पण लायक छ।
Paronychia - मानिसहरू भन्दा धेरै अक्सर महिलाहरु असर गर्ने एक रोग। आफ्नो नङ रूपमा रोलर्स एक मैनीक्योर र पेडीक्योर समयमा घाइते एक ठूलो संख्या प्राप्त। र मानिसजातिको निष्पक्ष आधा को साँघुरो जूता थप बारम्बार छन्।
paronychia को प्रकार
क्षणमा, यो paronychia, अर्थात् धेरै प्रकार हाइलाइट:
erosive र ulcerative paronychia;
ड्राई paronychia - कुनै पीप छ जसको लागि रोग, एक रूप हो। बरु, बलियो मानिस र actinic peeling नङ सापट छ। रोग को यो फारम अक्सर चोट, psoriasis र एक्जिमा को एक परिणाम रूपमा देखिन्छ।
Turniol - रोग को यो फारम बलियो suppuration सँगसँगै छ। यसरी कडा दुखेको औंठी। यस च्याउ Candida प्रकार वा गलसुआशोथ संक्रमण कारण संक्रामक paronychia को घटना, प्रमाण यस प्रकारको।
जब erosive ulcerous र फारम को नङ प्लेट वरिपरि छाला मा सानो बुलबुले निस्कनु गर्न सक्छन् र sores। यो रोग को यो फारम को नङ मा जान्छ कि एक रोग प्रक्रिया हुन्छ छ। यो सामान्यतया उपदंश भएका मान्छे मा विकास। अक्सर औंठी पीडित।
पुरानो paronychia। यस मामला मा व्यक्ति छैन cuticle, को नङ प्लेट छ र नै अचाक्ली thickened वा अरू एक बिकृति आकार छ। रोग यस प्रकारको मुख्य रूप पानी निरन्तर सम्पर्क मा विकास। यो जीवाणु र Fungi को विकास र प्रजनन को लागि एक धेरै अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ।
पहिलो लक्षण paronychia को
पहिलो चिन्ह, एक व्यक्ति paronychia विकास हुन्छ भनी संकेत - okolonogtevoy felon inflamed हुन्छ र दुख्यो गर्न सुरु गर्दा हो। यसबाहेक, दुखाइ मात्र वृद्धि हुनेछ। त्यसपछि त्यहाँ छाला रंग परिवर्तन हुन्छ। र recourse inopportune थियो भने, त्यसपछि व्यक्ति नङ प्लेट विकृत छ। यसबाहेक, lesion स्थान तापमान मा दिइएको दोष लागि अवलोकन छ।
जब पहिलो लक्षण एक व्यक्ति रोग को ठीक प्रकार निर्धारण गर्न सक्छन् जो एक विशेषज्ञ मदत खोज्नुपर्छ। यो यस्तो लापरवाही थप गम्भीर जटिलताहरू सक्छ देखि यो रोग, बेवास्ता गर्न सकिँदैन भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। यो एक भडकाऊ प्रक्रिया रोलर okolonogtevogo छ, र यो अक्सर inflamed औंठी छ हुनत यो रोग एक व्यक्ति को धेरै औंलाहरु असर गर्न सक्छ।
निदान "paronychia" पहिचान र केवल सर्जन राख्न सकिन्छ। नियम, कुनै पनि विशेष निरीक्षण आवश्यक छैन। मूलतः प्रभावित क्षेत्र को एकदम एक दृश्य निरीक्षण। Okolonogtevoy felon अचाक्ली inflamed, त्यहाँ औंला को सुनिंनु छ।
तर केही अवस्थामा एक विशेषज्ञ जस्तै विश्लेषण, को वितरण गर्ने सल्लाह दिन्छन् सक्छ:
पूरा रगत गणना;
चिनी लागि रगत परीक्षण;
Wasserman लागि विश्लेषण;
विशेषज्ञ एक फंगल संक्रमण वा मधुमेह, सिफलिस उपस्थिति आशङ्का छ भने माथिको अध्ययन, कि मामला मा निर्धारित।
सबै को पहिलो, यो दोष को उपचार यसको कारण निर्भर गर्दछ। यदि यो रोग एक फंगल संक्रमण द्वारा ट्रिगर थियो, चिकित्सा चिकित्सा विरोधी-फंगल चक्की र सामयिक nanodiamonds उपयोग गरदै समावेश गरिनेछ।
एक व्यक्ति संक्रामक paronychia पहिचान गरिएको छ भने, उपचार रक्सी compresses को मद्दतले बाहिर छ। यो प्रक्रिया मा लक्षण को पहिलो दिन सुरु हुँदा यो विधि मात्र सम्भव छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यस मामला मा, रोग एउटा रोग को एक परिणाम रूपमा विकास भने, तपाईँले पहिला औंला मा एक विद्रधि कारण जो Provocateur, को हटाउनु पर्छ।
यो रोग एक चोट वा उच्च तापमान कारण कारण थियो भने रोगी भएको provocateurs संग सम्पर्क, तपाईं उपचार सुरु गर्नु अघि सीमित गर्नुपर्छ। त्यसपछि कुशल जो रक्त सुधार र चयापचय पत्र लागूपदार्थ सल्लाह दिन्छन्।
दुखेको औंठी भने, तपाईं डाक्टर भ्रमण गर्न सकेसम्म आवश्यक छ।
यो रोग को माध्यम को विफलता को घटना सम्पूर्ण नङ गुना र ऊतक यसलाई तल असर गर्न सक्छ। यस मामला मा, सर्जरी छैन बचा गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, यो हेरफेर बेला नङ प्लेट को कोण खोलियो र सबै संचित पीप र necrotic ऊतक हटाउन छ। यो हेरफेर बेला नङ ओछ्यानमा र रोलर गर्न क्षति को एक जोखिम छ टिप्पण लायक छ, र त्यो यदि हुन्छ, यो नङ प्लेट बिकृति बढ्नेछ।
केही अवस्थामा, जब सुनिंनु विकसित गरेको छ मजबूत व्यावसायिक एन्टिबायोटिक सल्लाह दिन्छन् गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले intramuscularly वा intravenously या त प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, रोगी सुधार प्राप्त गरेपछि पहिले नै दोस्रो दिन अवलोकन।
यो समस्या सोडा स्नान संग Copes। यो बेकिंग सोडा को एक चमचा भंग गर्न न्यानो पानी एक गिलास आवश्यक हुनेछ। एक व्यक्ति यो दोष को यसरी छुटकारा प्राप्त गर्न योजना भने, यो स्नान मात्र पहिलो दिन प्रयोगको लागि प्रभावकारी छन् भनेर याद गर्नुपर्छ।
खतरनाक कि आफ्नो औंला मा विद्रधि हात?
मात्र पहिलो नजर मा यो गम्भीर रोग छैन देखिन्छ Paronychia। यो कि यो रोग को insidiousness छ। एक व्यक्ति घर को एक सुनिंनु व्यवहार गर्यो भने, त्यसपछि यो हेरफेर प्रदर्शन यी जटिलताहरु विकास हुन सक्छ रूपमा, अति सतर्क हुनुपर्छ:
तीव्र को purulent सुनिंनु जो अंगच्छेद सक्छ औँला,;
रगत विषाक्तता, जो हात को अंगच्छेद सक्छ, र केही अवस्थामा घातक।
यो केवल पहिलो नजर अपेक्षाकृत paltry paronychia रोग छ। त्यसैले, तपाईं स्वयं संलग्न अघि, तपाईं एक विशेषज्ञ परामर्श गर्नुपर्छ। तपाईंको आफ्नै स्वास्थ्य जोखिम छैन, तर सर्जन रोग को हदसम्म निर्धारण गर्न सक्षम र उपयुक्त उपचार सिफारिस गर्नेछ।
रोग रोक्न एकदम सरल छ। एक महिला manicures र pedicures गर्छ भने, यो प्रक्रिया को लागि उपकरण, हात सहित disinfected हुनुपर्छ। तर okolonogtevoy रोलर पहिले नै क्षतिग्रस्त छ भने, यो प्रभावित क्षेत्र पूर्णतया पुनःस्थापित छैन सम्म, त्यसपछि सम्म एक bactericidal प्लास्टर गोंद हुनुपर्छ।
यो औंलाहरु मा छाला कुनै पनि क्षति लागि तुरुन्तै घाइते साइट को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। यो उद्देश्य, उपयुक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वा रक्सी घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने को लागि।
धेरै विशेषज्ञहरु paronychia रोक्न मद्दत गर्नेछ भन्ने केही सरल प्रक्रिया गरिरहेको सिफारिस गर्छौँ:
नङ लागि बाहिर हेर्न वा तिनीहरूलाई चपाउनु;
भाँडा र फर्श धोइदिनुभएर गर्दा रबर पन्जा लगाउने;
उत्खनन र बढईगीरी काम पछि ध्यान हात धुन।
यो नियम मासु र माछा काटन लागू हुन्छ।
यो औंलाहरु को दोष को उपस्थिति सफलतापूर्वक जोगिन मदत गर्नेछ।
Paronychia औंला हात मा - एकदम अप्रिय र पीडादायी रोग, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंले प्रारम्भिक उपचार खोज्न छैन भने, तपाईंले जटिलताहरुलाई एक नम्बर प्राप्त गर्न सक्छन्। यो रोग को उपस्थिति समय मदत माग्न भने एक विशेषज्ञ गर्न बन्द एक यात्रा राख्न आवश्यक छैन, तपाईं कुनै पनि अतिरिक्त लागूपदार्थ बिना गृह मा दोष को हटाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। आफैलाई र आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह र paronychia रूपमा यो रोग गरौं, तपाईं विचलित गरिनेछ।
Dysbiosis को तयारी। लोक उपचार को आंतों dysbiosis उपचार
उच्च रक्तचाप लागि लोक उपचार। , व्यञ्जनहरु र सिफारिसहरू लड्न प्रभावकारी तरिकामा
अभिनेता एन्टोनियो Banderas: Filmography, जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
कति जनावर मोशाले जहाज मा लिए? सत्य र कल्पना
सुन्दर Clivia: हेरविचार र प्रजनन